Kuze kwaba seminyakeni embalwa edlule, isiketi eside sasibhekwa njengophawu olumelela uyisidala. Dress nge umphetho kwisitezi abahlala wazama ukufihla imilenze ugly, noma umane labo babengenalo kunambitheke. Namuhla isiketi Chic "phansi" kungatholakala wezigqoko ka fashionista. Ukuze ukhethe izicathulo ilungelo, jacket kanye izesekeli le nto little cute, ungaba ekahle oyisibonelo, uthathelwe mgwaqo bencoma nhla babantu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi yini okufanele uyigqoke nge eside isiketi ehlobo nokuwa.
We khetha phezulu
Isimiso esiyisisekelo lapho uthembele lapho ukhetha izingubo okuhlukile nge ngubo "maxi", okuthiwa "Okusele ezibukwayo." Kusho ukuthi bakhathale isiketi eside kufanele mfushane jackets, uwumnikazi wenkampani futhi amahembe. Njengoba isithombe esinjalo singamane ukukhokhela abanikazi sibalo ephelele, indlela inhlanganisela nge tight isikibha kuya maphakathi no-ethangeni. Tu- amathambo hip ngesikhathi esifanayo uyobheka mnandi kakhulu futhi ezilingayo.
Abesifazane abaningi imfashini lapho kuqala ekwindla uqale ezikudidayo phezu sizogqokani nge isiketi eside. Phela, Angazi ngempela ufuna ukuyeka izingubo zakho ozithandayo, ngisho amakhaza. Nalapha futhi, ungayithola indlela okuyolondoloza charm hhayi abaphazamisa esungulwe isithombe romantic. Ngokwesibonelo, zama ukubeka umphetho wengubo yakho emifushane lesikhumba jacket, uyobheka nesibindi esikhulu futhi stylish. Pritalennoe side amajazi efanelekayo abesifazane umbukwane abazi okuningi mayelana fashion. Uma uthanda "repersky" isitayela, ukugqoka ijazi iDemo. isiketi Beautiful eside ubukeka ephelele sangaphansi, udala okuchachambile, look zanamuhla.
Ukuzindla ngendlela ukugqoka isiketi eside Yiqiniso, kuyodingeka ucabange ngazo futhi izicathulo. Kuyamangaza ukuthi leli isici wezigqoko njengoba umaqondana ne izicathulo isithende eliphezulu kakhulu, futhi nenkambiso kwi yedwa flat. Inketho yokuqala kufanelekile isikhathi, ngakho-ke ngeke libukeke kakhulu futhi obizayo. Eyesibili ilungele labo abathanda isitayela Ethno noma fashion ingenelisi namuhla. Uma ukhetha isithende, kungcono uma kuyoba stud noma iplatifomu ezifihliwe. Inketho yokugcina ngeke ivumelane abanikazi okhalweni olubanzi, futhi owokuqala - amantombazane emaqakaleni mncane. Ngenxa yokukhetha okufana "ngaphandle ematheni", zama emafulethini ballet noma izimbadada wamaRoma. Akufanele ukugqoka izicathulo ezisindayo izithende ububanzi futhi izicathulo enkantolo.
Ungakhohlwa ukugqoka isiketi eside nge fashion izesekeli kubaluleke kakhulu. Zama afake isigqoko nenhle obanzi, okuyinto ukuvikela ngokuphelele usuka ukushisa kwehlobo, wamisa isimo romantic. Qinisekisa ukuthi usebenzisa jewelry amagilavu wosayizi omkhulu odelelayo noma emangalisa eside. Babukeka langa isiketi eside. Izikhwama ukukhetha kuyoba lula kakhulu, ngoba inhlanganisela amvikele futhi ethokomele nge ucezu izingubo, futhi sacs jikelele. Futhi, okubaluleke kakhulu, isiketi eside ukuba igqoke ngenhlonipho, imbuthuma ukuzethemba, zishaywe indawo amadoda stylish kunazo futhi fashion yabesifazane.
Iphupho indoda zanoma iyiphi iminyaka - izimoto collectible
Amaphupho. Imininingwane ukudluliswa ekusakazeni.
Ngingazi kanjani futhi ukuthi indlu yami izobhujiswa nini?